Global Voices teny Malagasy » Tanora Mpivady Miasa Hanavotana Ireo Mpanao Atletisma Ao Pakistan · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 01 Jolay 2016 16:07 GMT 1	 · Mpanoratra Sana Saleem Nandika Sylvia Aimée
Sokajy: Azia Atsimo, Pakistana, Fanatanjahantena, Mediam-bahoaka, Vaovao Tsara
Jawwad Farid & Fawzia Salahuddin miaraka amin'ny zanany lahy Amin. Sary avy amin'i Jawwad Farid
Tsy mpivady ohatran'ny mahazatra fotsiny i Jawwad Farid sy Fawzia Salahuddin – ny antoandro izy ireo manao ny asa maha-manampahaizana manokana azy mikirakira antontan'isa amin'ny resaka fiantohana sy ny loza mety hiseho, fa laniany amin'ny fanampiana ireo atleta tanora mba mikatsaka ny nofinofin'izy ireo kosa ny hariva, ny andro tsy fiasana ary ireo fotoana fialan'izy ireo sasatra.
Tsy zavabita mora io, ary niharitra ny mafy ela loatra ny atletisma tao Pakistan noho ny tsy fisian'ny famatsiambola na noho ny resaka politika. Tamin'ny taona 2014 , tsy nandray anjara tamin'ny delegasiona Pakistaney tamin'ireo Lalao Asiatika tao Korea ireo mpanao atletisma noho ny ady nisy teo amin'ireo fikambanana Olaimpika roa mirazotra eo an-toerana. Vao tsy ela akory tamin'ity taona  ity ihany, nisy ireo tatitra niampanga ny tsy fahaiza-mitantana ny vokatra tsizarizary azon'ireo mpanao atletisma ao amin'ny firenena, nandritra ireo Lalaon'i Azia Atsimo – taorian'ny sidina naharitra 84 ora nankanesana tany India, andro iray taorian'ny lanonana fanokafana vao tonga ny tarika.
Nefa, tsy nandray ny tsia ho valinteny i Farid sy Salahuddin. Nandritra ireo taona roa lasa, niasa nanao fanangonana vola ho an'ny Klioba Sindh Track & Field ireo mpivady ireo, klioba izay mamaritra ny aminy hoe “klioba atletika tsy mainkina manokan-tena hanofana atleta tanora any Sindh Tanàndehibe sy Ambanivohitra koa ” – ary tsy izay ihany – nanangana zavatra mba hahafahan'ireo mpitia atletisma manaraka ny tantaram-piainana manokan'ireo atleta tanora koa izy ireo, amin'ny fanomanantenan-dry zareo mba hanatontosany ireo nofinofiny mikasika ny atletisma. Teo amin'ny bilaoginy, miresaka momba an'i Abdul Mueed Baloch, iray amin'ireny kintana ireny, i Farid. Manofahofa tsara ny tolon'i Mueed miaraka amin'ny fanirian'i Farid sy ny firaiketam-pony amin'ireo atleta tanora ilay tantara  mahafinaritra:
Nandritry ny iraika amby roapolo volana, nanaraka vondron'ankizy iray aho niaraka tamin'ny fakantsariko. Heverina ho ny lalaon'ny Quaid-e-Azam tao amin'ny Jinnah Stadium tao Islamabad no fakàna sary farany nataoko. Tetikasa iray tsy miankina momba ireo biby fitaiza an-trano no asa fanadihadiana nataoko tamin'izay. Nandritra ny taona, naka ny fiainany manokana io hanjifàna ny rehetra manodidina ahy[…]. Io no tantara izay nahafatifaty ahy ny mitantara azy mandritra ny fiainako manontolo. Inona no mahate-ho-tia amin'ny atletisma? Nahoana no raiki-pitia aminy aho sivy amby roapolo taona lasa izao? Inona no mampihazakazaka ireo zaza ireo? Avy aiza izy ireo? Ahoana no handrindràn'izy ireo ny aretim-po azo amin'ireo hazakazaka tsy tontosa sy ny rarintsaina amin'ny fanazarantena?
Inona no mahatonga azy ireo miverina hahazo sazy misimisy kokoa, isanandro isanandro? Ahoana no hahafahan'izy ireo mampiseho amin'izao tontolo izao ny tena dikan'ny hazakazaka ho azy ireo? Ny an'i Abdul Mueed no tena sarin'ankizy tsara indrindra mikasika io tantara io. Mpilalao baolina kitra avy amin'ny Dalmia izay nampirina (nanantona) ireo gôdasiny mba hihazakazaka voalohany tamin'ny Febroary 2015. Làlana lavitra no vitany tao anatin'ny vovoky ny lalao baolina kitra an-tanimbary niaraka tamin'ireo nofinofiny. Araka ny fitantarany ny tantarany, mipetraka izy sady manoratra. Izy no hitanao voalohany teto. Raha sitrapon'Andriamanitra, inshahallah, hahitana maro toa azy ho avy ianareo ato anatin'ireo taona rehetra ho avy.
Nivoaka avy ao anatin'ny vondrom-piarahamonina kely karama sy atao anjorom-bàla ao Karachi i Baloch. Tahaka izay nametrahan'i Farid azy tao anaty fanadihadiana iray izay noraketin'izy ireo an-tsary, “faritra iray kely fidiram-bola voatery tao anelan'ny orinasa fanamboarana simenitra efa nikatona sy toeram-piantsonan-tsambo i Dalmia”. Tsy nanakana azy akory izany: tamin'ny taona lasa, in-telo nahazo amboaram-pirenena i Baloch. Miasa mafy i Farid ankehitriny mba hiantohana ny hahatogavan'i Baloch sy ireo hafa amin'ireo lalao Asiatika amin'ny taona 2018. Fanadihadiana fohy iray notontosain'i Farid sy Slahiddin niaraka hanasongadinana an'i Baloch sy ireo atleta hafa, no hanampy amin'ny fanangonam-bola ary hahazoana antoka fa hahasarika ny saina sy hahazo famatsiam-bola sahaza ireo atleta tanora ireo, mba handraisana anjara amin'ireo lalaom-paritra sy iraisam-pirenena.
Mikasika ny fanarahana tovolahy iray mba hahazo ny fankatoavana iraisam-pirenena ho an'ny fireneny ny tantara mampihetsim-po an'i Baloch. Ao anatin'ilay sarimihetsika, mitantara ireo fanantenany, ireo vetsovetsom-pony sy ny fahavitrihany hanohy hanatratra ireo tanjony i Baloch:
Tsy dia misy dikany, nefa asa mafy. Nikotrana mafy aho, saingy ny fantatro dia mila manao an'io aho sady mila mandroso.
Tao anaty lahatsoratra iray ho an'ny rehetra  tamin'ny Facebook, miteny ny tantaran'i Baloch sy ny toerana fototra tazonin'ny Klioba Sindth Track & Field, ny mpianatra lalàna iray:
Ireo mpanazatra ao amin'ny Sindth&Field indray no nahavita an'io. Nampiofana an'i muheed ho rehareha sady nanampy azy ho ny lehilahy haingam-pandega indrindra ao Karachi. ❤️
Ireo mpampiofana, Roma Altaf, Ahmed Wali ary Abdullah Chandio, dia manokana ny faran'ny herinandron'izy ireo mba hiantohana izay hananan'ireo atleta tanora ireo ny fotoana rehetra sady hanaovany izay fanazàrana ilain'izy ireo mba hahafahan'izy ireo mandray anjara amin'ireo lalaon'ny matianina, araka izay azo atao.
Ireo mpampiofana, Abdullah Chandi (avy eo ankavia), Roma Altaf, Ahmed Wali eo amin'ny Klioba Sindh Track & Field. sary avy amin'i Jawwad Farid
Ary tsy Moeed fotsiny akory – ireo atleta hafa fanta-daza izay nofanin'izy ireo tao amin'ny klioba dia ahitàna an'i Hiba Khurshid, 12 taona, izay nahazo medaly volamena telo sy nandrombaka ny amboaran'ny atleta vehivavy mendrika indrindra tamin'ny fiadiana izay ho tompondakan'ny atletisma iraisam-paritra nampanaovin'ny filankevi-pitantanana ny fanatanjahantena ao Pakistan . Araka ireo tatitra  tamin'ny media, io no fotoana voalohany teo amin'ny tantaran'ireo atleta tanora (latsaky ny 16 sy 17 taona) ka nandrombahan'ireo atleta tanora roa avy ao amin'ny Sindh ireo amboaram-pirenena tsara indrindra.
Nanao fanangonam-bola ihany koa i Farid sy Salahuddin mba hikarakarana tsy tapaka ireo hazakazaka hampaherezana ireo atleta hifaninana. Inona no fomba tsara kokoa ho fandrisihana ireo atleta mihoatra noho ny hoe manana vahoaka maro hihoby azy ireo?
Mpampiasa Twitter iray mpanaraka tsy tapaka ny Klioba i Hareem Sumbul:
It's heartening to seethe journey of STFClub since the first event #BreakTheBarrier  #U17Athletics  #STF  #KarachiTrack  pic.twitter.com/kh8emYBNYG 
Mampientam-po ny mijery ny dian'ny Klioba STF hatramin'ny hetsika voalohany #BreakTheBarrier  #U17Athletics  #STF  #KarachiTrack 
Mpisera aterineto maro no nipoitra nanohana feno ireo atleta:
Winning the race doesnt matter,beating yourself Does Give better than ur best guys.#BreakTheBarrier  #STF  #KarachiTrack  #U17Athletics 
Tsy midika inona loatra ny mandresy amin'ny hazakazaka, ny fandresena ny tenanao No Hanome ny tsara lavitra noho izay efa vitanareo ry akama. #BreakTheBarrier  #STF  #KarachiTrack  #U17Athletics 
Mpanao gazety menavazana i Afia Salam no sady tonian-dahatsoratra fahiny tao amin'ny “The Cricketer” no nanao famorina ireo namany mba hanampy  amin'ny fandrakofana amin'ny media:
Ndao ry namako mpanao gazety ara-panatanjahantena & hafa mpankafy fanatanjahantena… nahavita io halavirana io ireo zaza ireo. Ampio izy ireo handeha hihoatra an'io. ‪#‎SupportTrackAndFieldSports‬ 
Mandritra izany fotoana izany, miresaka mikasika ny tsy fahombiazan'ny diany, ny halemeny ary ny fanolorantenany tao amin'ny bilaoginy  i Farid,
Heveriko fa ny fatran'ny ratram-po isan'andro, ny fisidinana iray miaraka amin'ny hadalana sy ny fiatrehanao ny fahalemenao ho sahala amin'ny tanora iray miala sakana no sarany kely mila aloa raha toa izany ka mamela anao hanana fanomezan-pahasoavana handini-tena sy hangetaheta bebe kokoa. Ny fihazakazahana manenjika ny famantaranandro, ny fiatrehana ireo fetra azonao atao ary avy eo miverina eo amin'ny tsipika fanombohana mba hanosehanao ny tenanao hihoatra kely noho ilay teo, ny famerenana an'io foana isanandro sahala amin'ny milina misy motera, romotra no tena fanazarantena raha te-hahatratra ny fahalehibeazana ianao. Tsy mora io, tsy ho an'ny rehetra. Raha tsy mahafaty anao…
Mampiseho sary maha-be fanantenana momba ny hoavin'ny atletisma ao Pakistan, ny tantara mampahery momba ireo atleta, ireo mpanazatra azy ary ireo mpanohana azy ireo. Miresaka mikasika ny famakiana ireo sakana io – satria rehefa tonga ny fanatanterahan'izy ireo ny nofinofiny, dia tsy misy avelan'izy ireo ho tavela eny amin'ny làlany.
Efa niaraka niasa tamin'i Jawwad Farid tany aloha tany ny mpanoratra ity lahatsoratra ity.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/07/01/83625/
 Klioba Sindh Track & Field : https://www.facebook.com/SindhTrackFieldClub/?fref=ts
 lahatsoratra iray ho an'ny rehetra: https://www.facebook.com/maham.pirbhoy/posts/10206174014242809
 ireo tatitra: http://www.dawn.com/news/1184563
 November 7, 2015: https://twitter.com/HareemSumbul/status/662913488369635328
 November 7, 2015: https://twitter.com/uayub33/status/662896653548974080
 mba hanampy: https://www.facebook.com/afia.salam/posts/10153053386743713